अब इन्स्टाग्राममा हुनेछ मोटो कमाई, लञ्च भयो नयाँ फिचर ! लिनुहोस जानकारी – List Khabar
Home / समाचार / अब इन्स्टाग्राममा हुनेछ मोटो कमाई, लञ्च भयो नयाँ फिचर ! लिनुहोस जानकारी
admin January 24, 2022 समाचार Leaveacomment 30 Views
अब इन्स्टाग्राममा हुनेछ मोटो कमाई, लञ्च भयो नयाँ फिचर, इन्स्टाग्रामले कन्टेन्ट क्रियटर्सलाई पैसा कमाउने अर्को एउटा तरिका दिइरहेको छ । मेटाको फोटो र भिडियो शेयरिङ एप इन्स्टाग्रामले सब्सक्रिप्सन फिचर जारी गरेको छ । यो फिचर अघिल्लो वष नोभेम्बरमा देखिएको थियो ।
यद्यपि, इन्स्टाग्रामले यसलाई केही अमेरिकी क्रिएटर्सका लागि पनि उपलब्ध गराएको छ । यो फिचरको मद्दतले क्रिएटर्सले आफ्ना पेड फलोअर्सका लागि एक्सक्लुसिभ इन्स्टाग्राम लाइभ भिडियो र स्टोरीमा पहुँच दिन सक्नेछन् । यतिमात्रै होइन सब्सक्राइबर्सले पनि एउटा विशेष ब्याच पाउनेछन् जसले उनीहरुलाई क्रिएटर्सको कमेन्ट सेक्सन र इनबक्समा अन्य प्रयोगकर्ताभन्दा भिन्न पहिचान दिनेछ ।
इन्स्टाग्रामले यो फिचरलाई १० अमेरिकी क्रियटर्ससँग लाइभ गरेका छन् । एपले यसलाई अल्फा टेस्ट मानिरहेको छ । अर्थात्, क्रियटर्सले यो फिचरलाई प्रयोग गरेर सर–सल्लाह दिनेछन् । सब्सिक्रिप्सनको कुरा गर्ने हो भने क्रियटर्सलाई आफ्नो सामग्रीको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता हुनेछ । ०.९९ डलरदेखि ९९.९९ डलर प्रति महिनाको बीचमा क्रियटर्सले ८ प्राइस पोइन्ट पाउनेछन् । सब्सक्रिप्सनपछि प्रयोगकर्ताले स्टोरी हाइलाइट्सजस्ता सब्सक्राइबर्स–ओन्ली कन्टेन्टको एक्सेस पाउनेछन् ।
Previous प्रियंकाका पति निक जोनसले बच्चा लिएको तस्विर सार्वजनिक, आयो बधाईको ओइरो
Next जम्मा ८० हजारमा बुलेट बाइक !